General News | U.N.O.B | Page 2
Asian Culture Festival 2012
Thai American Association မှ ကြီးမှူးတဲ့ ၂၂ ကြိမ်မြောက် Asian Culture ပွဲတော် ကို March ၃ ရက်နဲ့ ၄ ရက်နေ့က Florida, Homestead ရှိ Fruit & Spice Park ထဲမှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲတော်မှာ UNOB အသင်းကလည်း ဖိတ်ကြားမှူ့အရ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ပါဝင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Asian Culture ဆိုတဲ့အတိုင်း Asian လူမျိုးပေါင်းစုံက မိမိတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှူ့ အကြောင်း၊ နိုင်ငံအကြောင်းတွေနဲ့ ရိုးရာ အစားအစာတွေကို ထုတ်နှုတ်ပြသ ခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲတော်မှာ အစားအစာမျိုးစုံ၊ ရိုးရာပစ္စည်းမျိုးစုံတွေ ရောင်းချကြတဲ့အပြင် သစ်ပင်မျိုးပေါင်း စုံလင်အောင် ရောင်းချကြတာကိုလည်း တွေ့ရှိကြရပါတယ်။ ပွဲတော်ဟာ မြို့ကြီးများနဲ့ အနည်းငယ် အလှမ်းဝေးသော်လည်း ပွဲဖွင့်ချိန် မနက် ၁၀နာရီ က ပွဲပိတ်ချိန် ၆ နာရီအထိ တိုးကြိတ် စည်ကားနေတာ ဆက်တိုက်ပါ။ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်ဆင်နွဲကြတာမို့ ရောင်စုံများစွာ လှုပ်ရှားသွားလာ နေကြတာကို ကြည့်ရတာ ရင်သပ်ရှု့ မောပါ။ လူမျိုးတစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် တလှည့်စီ တင်ဆက် Read More...
၀င်ငွေခွန် ဘယ်လိုဆောင်မလဲ (တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ)
နှစ်သစ် တစ်ခုပြောင်းပြီဆိုတိုင်း လုပ်ငန်းရှင်များ ကတော့ ခေါင်းခဲရစမြဲပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကိုယ့် လုပ်ငန်း ကောင်းမကောင်းပေါ် မူတည်ပြီး ၀င်ငွေခွန် ဘယ်လို ဆောင်ရင် အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာ နှစ်သစ်ကူးတဲ့ ညကတည်းက တွေးနေရပြီပေါ့။ အင်္ဂလိပ်စကား အခက်အခဲ ရှိသော သူများအတွက် ပိုပြီး ခေါင်းကိုက်စရာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သိလိုသမျှ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ မှန်သမျှကို နားလည်အောင် မပြောတတ်၊ သူပြောပြတာလည်း ရေရေရာရာ နားမလည် အဖြစ်မျိုး ကြုံရတတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ကယ် လိုအပ်တာထက် ပိုမို ကုန်ကျရမှုမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀ ရက်နေ့ ညမှာ ၀င်ငွေခွန် ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုပြုလုပ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှ မနှင်းနှင်းလွင်က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လာသူများရဲ့ သိလိုသော မေးခွန်းများကို လည်း ဖြေကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်ရောက်လာသူများအတွက် ညစာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ စီစဉ်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မငယ်လေးရဲ့ မုန့်ဟင်းခါး၊ ထမနဲ အပါအ၀င် အခြား အစားအစာများ စီစဉ်ထားမယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို လာရောက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ Hostess : Ma Hnin Hnin Lwin Read More...
General News, UNOB
မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးမိလို့ ဒီသတင်းကိုတင်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သိတဲ့လူလဲသိပြီးလောက်ရောပေါ့ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျတော်တို့ UNOB လည်း မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အရေးအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လက်တွေ့ ကျကျ ဘယ်လိုများ ဝိုင်းဝန်း ပန့်ပိုးကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားမိကြရအောင်ပါ။ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ယနေ့ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူများ၏ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ(8am-12:15am) သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အကျဉ်းသား ၆၅၁ ဦးကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက် နိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးကနေ အခုလိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပြီး တချိန်ကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်လည်းပြန်လွတ်လာတဲ့အထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကအကျဉ်းကျခံနေရသူအားလုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Burma VJ သတင်းထောက်တွေလည်း ပြန်လွတ်လာကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ် 8:00 Am သရက်အကျဉ်းထောင်မှ ဝန်ထမ်းများ၏ ပြောကြားချက်အရ လွတ်မြောက်မည့်သူ များထဲတွင် ကိုမင်းကိုနိုင် ပါဝင်နိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။ သတင်းရယူရန် စောင့်စားနေသည့် သတင်းထောက်များ ၁၂ ယောက် ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး အတည်မပြု နိုင်သေးသည့် သတင်းများအရ ကိုမင်းကိုနိုင်အား နံနက် ၈နာရီခွဲတွင် လွှတ်ပေးမည်ဟု သိရှိရသည်။ 8:10 Am သရက်အကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း ၂၇ ယောက် လွတ်မြောက်မည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။ 8:40 Am စစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူ ၁၀ ဦး အနက် ၉ ဦး နှင့် ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်မှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူ ၁၀ ဦးအနက် ၉ Read More...
Featured, General News, I.T & Knowledge
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလောက်က pcworld.com မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Camera လေးတစ်လုံး အကြောင်းဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ အဲဒီ camera လေးရဲ့ သမိုင်း၊ တီထွင်ထားတဲ့ သူရဲ့ Interview တွေ၊ သူတို့ Marketing project တွေ လျှောက် ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လိုပဲ Camera/Tech ၀ါသနာပါမယ့် သူတွေကို ပြန်ပြီး ဝေမျှဖို့အတွက် UNOB ကနောက်ထွက်မယ့် Newsletter မှာ ထည့်ဖို့ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအထိ မထွက်နိုင်သေးတာကြောင့် Web Site ပေါ် တင်ဖြစ်တာပါ။ တစ်ချို့လဲ Internet ပေါ်မှာ ရေးပြီးသား ဖြစ်ကောင်းဖြစ် ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းက Lytro’s Light Field Camera ပါ။ အဲဒီ Camera လေးကို ထွင်ထားတဲ့ Ren-Ng ကတော့ iPhone က Cellular တွေရဲ့ သမိုင်းအသစ် ခင်းခဲ့သလို သူ့ရဲ့ Lytro ကလည်း Digital Camera တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကို အသစ်ရေးမယ် လို့ ရဲရဲ အာမခံထားပါတယ်။ သူ့အပြောတင်မဟုတ်ပါဘူး Lytro Camera အကြောင်းကို Internet မှာ ရှာကြည့်လိုက်ရင် Read More...
Where shopping isapleasure ဆိုတဲ့ Publix Ad ကို ခေါင်းစဉ်ရွေးလိုက်တာ ပိုပြီးသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ အခုပါးချင်တဲ့ သတင်းက West Palm beach နားက သူတွေကတော့ သိပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သွားရင်းလာရင်း ကြုံလို့ ၀င်ချင်လဲ ၀င်သွားလို့ရအောင် သတင်းကောင်း ပေးချင်တာပါ။ နံပတ် (၁) က Restaurant Depot ဆိုင် အသစ်တစ်ဆိုင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လက Riviera beach မှာ ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ Sushi bar ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ တော်တော် သဘောကျကြပါတယ်။ အရေးပေါ်လိုအပ်လို ပစ္စည်းတစ်ချို့ ၀ယ်ချင်ရင် Pompano အထိ ဆင်းနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဘာတွေရလဲ ဆိုတာကတော့ သိပြီးသားတွေ ဖြစ်နေတော့ ရေးမနေတော့ပါဘူး။ လိပ်စာရယ် store hour ရယ်ကတော့ အောက်ဖက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ 5840 N Military Trail Riviera Beach, Fl 33407 Phone: 561-242-6161 Store Hours: Mon: 7:00 AM – 6:00 PM Tue: 7:00 AM – 6:00 PM Wed: 7:00 AM – 6:00 PM Thu: 7:00 AM – 7:00 PM Fri: 7:00 AM – 6:00 PM Sat: 7:00 AM – 5:00 PM Sun: 9:00 AM – 3:00 PM Restaurant Depot 5840 N Military Trail Riviera Read More...
မွေးနေ့မင်္ဂလာ UNOB အလုပ်အမှူ့ဆောင်ကော်မတီဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် ကိုသီဟန်နှင့်ဇနီး မစန်းစန်းမော်တို့၏ ပထမသမီးရတနာလေး ဆိုဖီရာမော်ဟန် မွေးဖွားခဲ့သည်မှာ မနေ့က ၆နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ သားသမီးရတနာများ မွေးဖွားခဲ့ရခြင်းကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ အသိအမှက်ပြုသည့်အနေဖြင့် မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ကြခြင်းမှာ မင်္ဂလာတပါးဖြစ်သည်နှင့်အညီ သမီးလေးဆိုဖီရာ၏ မွေးနေ့ပွဲကို Boca Raton ရှိ Asian Buffet ဆိုင်တွင် သမီးလေးမွေးနေ့ ဖြစ်သောစက်တင်ဘာ၂၃ ရက်နေ့မှာပင် ဖိုးဖိုးဦးမျိုးညွန့် ဖွားဖွားဒေါ်ရီရီနှင့်တကွ မွေးနေ့ပွဲလာပရိတ်သတ်များ တပျော်တပါးကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနေ့က မွေးနေ့ပွဲ၏ အနှစ်သာရများဖြစ်ကြသော စုပေါင်းပျော်ရွှင်ခြင်း စုစည်းခြင်းနှင့် မေတ္တာ ပို့သသက်ရောက်ကြခြင်း တို့ တည်ရှိနေသည့်အတိုင်း မွေးနေ့ပွဲ လာရောက်ကြသူ အားလုံးရင်ကို စိမ့်ဝင်စေခဲ့ပါသည်။ UNOB ၏သမီးလေး ဆိုဖီရာ ဤမွေးနေ့ပွဲမှသည် နောင်နှစ်တရာကျော်တိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ နှစ်စဉ်မပျက် ကျင်းပနိုင်ရန် UNOB မှဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါသည်။ ။ Read More...
ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ကူညီရေး
ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ကူညီရေး မြန်မာတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအသင်းဝင် မိဘညီအစ်ကို မောင်နှမများခင်ဗျား- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော စစ်ပွဲများကြောင့် နေရပ်ဌာနေ စွန့်ခွာပြီး စစ်ပွဲများနှင့်ဝေးရာ လွတ်ရာကင်းရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသော ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ စားဝတ်နေရေးနှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်းများ အထူးလိုအပ်လျှက်ရှိသည်ကို သတင်းဌာနများ မှတစ်ဆင့်ကြားသိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်ဖွားတိုင်းရင်းသားခြင်း လူသားခြင်းစာနာ ထောက်ထား သောအားဖြင့် ပါဝင်ကူညီလိုသူများ စေတနာတရား ထက်သန်သလောက် U.N.O.B မှတစ်ဆင့် ပါဝင် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။ လာမည့်သောကြာနေ့(8/12/11) တွင်ထိုစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များစခန်းသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးပို့ရန် အစီအစဉ်ရှိပါ၍ အချိန်မှီပါဝင်ကူညီနိုင်ပါကြောင်း သတင်းပေး နိုးဆော်အပ်ပါသည်။ အလှူငွေပေးပို့လိုပါလျှင်- U.N.O.B P.O.Box 20196 West Palm Beach, FL-33416 အလှူငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပြန်လည်ပို့ပေးပါမည်။ အလှူငွေကိစ္စအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါလျှင်- ကိုအောင်သက် (561)414-3221 ကိုဘရန်ရှောင် (561)351-7343 ကိုမောင်ငယ် (561)271-0251 ကိုသက်လွင် (561)676-5903 Dr. Read More...
ကျွန်တော်များ UNOB အဖွဲ့၏ အကြံပေးလူကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သော ဆရာဦးဖေသန်းမောင်၏ (Surprise birthday party) မွေးနေ့ပွဲကို 22 Jan 2011 နေ့ Plantation Country Club တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ UNOB အဖွဲ့မှ EC တစ်ချို့ တက်ရောက် ချီးမြင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာ၏ အဖွဲ့အပေါ် ကူညီမှုများ၊ လူငယ်များကို အားပေးတတ်သော စိတ်စေတနာများကို ကျေးဇူးတင်ခြင်းအားဖြင့် ဥက္ကဌ ကိုကျော်ဦးမှ လည်ကောင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ကိုစိန်မြင့်အောင်မှ လည်ကောင်း အသီးသီး ဂုဏ်ပြုစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ တက်ရာက်လာသူများနှင့် အလွန်စည်ကား သိုက်မြိုက်သော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့တစ်ရက်ဖြစ်ကြောင်းကို ဓါတ်ပုံများမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် ပြောပြနေပါလိမ့်မည်။ “HAPPY BIRTHDAY” Read More...
အသင်းသူ အသင်းသားများနှင့် Sushi လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြသော လုပ်ငန်းရှင်များ အားလုံးအတွက် အရေးကြီး သတင်းတစ်ခု ရရှိပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနမှနေ၍ Palm Beach County, Florida အတွင်းရှိ AFCFC လုပ်ငန်းရှင် တစ်ချို့အား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ တိတိကျကျ အဖြေမသိရသေးသော်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များ (Franchisee) နှင့် ၀န်ထမ်းများ (Chefs, Helpers) ၏ အလုပ်ချိန်များနှင့် အခြေခံလစာများ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ ပေးဆောင်ထားသော အခွန်ငွေများ နှင့် ဆိုင် အရေအတွက်၊ ၀န်ထမ်း အရေအတွက်များအကြောင်းကို အဓိကထား၍ မေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။ South Florida အတွင်းရှိ အခြားသူများကိုလည်း ထပ်မံ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ အသေးစိပ် အခြေအနေများ မသိရသေးခြင်းကြောင့် အတိအကျ မပြောနိုင်သော်လည်း ၀န်းထမ်းများ ရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် မိမိဝန်ထမ်းများနှင့်ဆိုင်သော အချိန်၊ လစာ၊ အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်း ဆိုင်ရာများကို (အသေအခြာ မသိရသေးသော်လည်း) ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားလျှင် သင့်တော်မည်ဟု ယူဆပါသောကြောင့် ယခုလို အသိပေး ကြေငြာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိ အနီးအနား Read More...
iPhone App “OPlayer” supports Windows Media Video
An iPhone app called “Oplayer” supports Windows Media Video (wmv) andalot more media formats which means it can play video within our UNOB web site from your iPhone. Our web site only uses WMV format for video posts. Please launch App store in your iPhone and search for Oplayer, there are free version and paid version $2.99. Only difference is paid version doesn’t have Ads. Even though free version can handle decent job. So you can try before Read More...